Umsebenzi eMbindi Mpuma-Ukwazisa-Ingqesho 🥇 - Ukuqashwa
Phucula iprofayile yakho ukuba ube ne-100%
Ukuphuculwa kwe- $ 4.99
I- $ 9.99 yokuGqibezela iProfayili
* I- $ 4.99 Yonke into ekhetho olukhululekileyo + Umphathi wethu we-HR kunye noMlawuli baya kujonga kwi-CV yakho kwaye siyenza i-CV yakho ibonakale eDubai, amalungu e-UAE njenge-expat ye-premium.
* I- $ 9.99 Thumela i-CV ngokupheleleyo kwi-portal yethu ukuze, abaphathi be-HR kunye nabaLawuli bayojonga kwi-CV yakho kwaye siya kuqinisekisa ukuba i-CV yakho iza kuqala kwi-UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait nakwamanye amazwe amaninzi.
Inqaku lingeniswe ngempumelelo. Enkosi!
Thumela Inqaku kunye neCheers eDubai
Ngaba uyamthanda uDubai? -Ngoku unethuba lokubhala inqaku okanye inqaku elifutshane kunye nenqaku elide kwi-United Arab Emirates.
Bhala inqaku lakho lamagama angenamkhawulo! Thumela i-vibes ezakhayo!*
Amagama aphambili kwinqaku lakho:
Yahlulwe yiComma-Dubai, Inkampani yam, Indlela yokuphila,
* Ewe, unokongeza ikhonkco kwiwebhusayithi yakho!
* Inqaku lakho liza kuthunyelwa kwiwebhusayithi yethu ukuze, Abaphathi beShishini kunye nabanye abantu bakwazi ukuyibona.
* Inqaku kufuneka ubuncinci bamagama e-500 kodwa ikhonkco liyinto engekhoyo!
* Simahla! Sithumela inqaku / inqaku elifutshane live "icandelo lethu" IYAJOQA).
* I- $ 9.99 Yonke into ekukhetheni ngokukhululekileyo + Umphathi wethu weNtengiso uya kujonga umxholo wakho kwaye siya kuqinisekisa ukuba inqaku lakho kunye nekhonkco liyabonakala eDubai, amalungu e-UAE kunye nenqaku lakho banokuba namagama angama-2,000.
* $ $ 29.99 Sibhala inqaku lakho kunye noyilo ngokupheleleyo ngeenjongo ze-SEO. Ke, iGoogle, i-Bing, i-Yahoo, i-DuckDuckGo iirobhothi ziya kujonga umxholo wakho ngendlela efanelekileyo kwaye siya kuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho yaneliseke kakhulu kwi-UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, nakwamanye amazwe aseMiddle East. (* Amagama angenamda)
Thumela Inqaku lasimahla!
I- $ 9.99 ibonakala kwi-Dubai, ukuya kuthi ga kwi-2,000 yamagama!
Idrafti yenqaku le- $ 29.99 Ngokugqibeleleyo ngeenjongo ze-SEO kuMbindi Mpuma.
Thumela Inqaku & Qhagamshela!
Umsebenzi eMbindi Mpuma kunye nolwazi olunzulu
Umsebenzi eMbindi Mpuma kunye nolwazi olunzulu malunga neziphumo. Kungenxa yoko abaqashi bethu babhala kuwe. Ukufumana umsebenzi ngaphandle kwamanye amazwe ukususela phesheya ukuya eMbindi Mpuma akulula. Ukukhangela umsebenzi kwi-UAE. Kuthatha ixesha kunye nemigudu. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ukwenza ngendlela echanekileyo kuya kusebenza kuwe.
Abafudukayo bathuthela kumazwe amaninzi eMiddle East. Ngale nto engqondweni, inkampani yethu yokuqesha ibhala eli candelo. Injongo yethu kukukubonisa indlela. Ngokukodwa indlela yokufumana umsebenzi eMbindi Mpuma.
Ikhampani yedolophu yase-Dubai ngokuqinisekileyo inceda abanye ukuba bafumane umsebenzi. Ngale nto engqondweni yethu nkampani enika iinkcukacha. uya kusebenzisa iinkonzo zethu uza kufumana umsebenzi.
I-Qatar eMbindi Mpuma yinto efanelekileyo kakhulu yokusetyenziswa kwabasebenzi bamazwe ngamazwe. Wena njenge-expat entsha kufuneka ulawulo lokuphanda. Ngakolunye uhlangothi, i-Kuwait neBahrain yinto elula ukuqala umsebenzi. Kanye neSaudi Arabia neYiputa. Kuzo zonke zifanelekile ukukhangela umsebenzi kwiMiddle East.
Yingakho iqela lethu leengcali libhala le post post. I-Dubai City Inkampani elawula iinkampani ezintle. Zonke zifakwa kwiluhlu lokuqesha iinqununu. Ngoko, ngale ngqondweni, kufuneka wazi apho ungathumela khona kwakhona. Ngenxa yokufumana umsebenzi ofanelekileyo eMbindi Mpuma. Kufuneka ufundiswe ngokupheleleyo.
Njani Ngezixeko Zase Dubai?
Sibhala nge-Dubai idolophu ephawulekayo yinqanaba elifutshane le ndawo. Idolophu yase-Dubai yinkcazelo emfutshane yokusasaza. Eli nqanaba lilonke malunga nenkunzi ye-United Arab Emirates. Dubai nge-2.1 abantu abayizigidi. Esi sixeko sikhulu kakhulu.
Idolophu yaseDaibha yindlela encinci yobomi obutsha. Eli nqanaba lilonke malunga nenkunzi ye-United Arab Emirates. I-Dubai kunye ne-2.1 yabantu abayizigidi, itholakala kummandla oselunxwemeni osenyakatho. I-Dubayi kukusingatha iWorld Expo 2020. Udidi oluhambelana nesikhokelo sokuhlala kunye nokusebenza kwiDolophu yaseDaibha. Kwelinye icala, inkunzi ye-UAE yindawo engcono kakhulu emhlabeni. Ungathethi ezinye indawo ezimangalisayo eMbindi Mpuma.
Le ndawo emangalisayo inemiba eninzi. Njengoko kunjalo, ukuphakamisa ukuqonda kwabo kwii-Airports zaseArabic. Ngenxa yoko, esi sixeko senziwe. I-hub enkulu yezothutho kubagibeli kunye nemithwalo. Ngaphezu koko, yiba yi-Airports ezidumileyo eMiddle East. Enye inyaniso yezoqoqosho yayingeniso ye-Oil. I-Texaco i-Oyili yokuqala yafumana iigoloni ze-petroli kwi-1969. Ukususela ngoko uqala ukuqhubela eMelika naseYurophu. Imali engenayo yeoli ye-Dubai yenzelwe ukukhawulezisa yonke imarike ye-UAE.
Kukho kwakhona ukuphuhliswa kokuqala kwesi sixeko. Ekuqalekeni kwakuyizitrato kunye neebhloko ezimbalwa. Akukho mizi kunye nobomi bokunethezeka. Intlango elula kunye neemoto ezimbalwa ezindala. Ngokuqhelekileyo, esi sixeko saqala ngentlango ecocekileyo. Ngakolunye uhlangothi, lovimba wesigxina awuphelelanga. Ngaphezu koko, kuba amanqanaba okuvelisa aphantsi. Ukuyibeka enye indlela, iThe emirate uhlobo lwasentshona lwangaphandle kunye nabemi bendawo. Umzekelo wezolimo zase-Arabhu uqhuba uqoqosho lwawo. Ngokomzekelo amaHhotele kunye nendlela yokuphila yokunethezeka. Khawuleza ube yintlawulo engenayo ye-Government of Dubai.
Ingaba i-Dubai iyindawo e-Amazing e-UAE?
Esi sixeko ngoku siza kubhenketho lwezokhenketho. URhulumente naye utyalole kakhulu kwi-aircraft kunye ne-business ye-estate. Ukungakhankanyi ngokubalulekileyo inkonzo yezemali. Idolophu yaseDaibhania isandula kutsala ihlabathi. Abantu abatsha ba tyelele eli dolophu ukusuka kwiindawo ezininzi emhlabeni jikelele.
Iingxowa-mali eziphambili zenzile iminyaka edlulileyo. Ngeenkqubo ezininzi zokwakha ezinkulu kunye nemidlalo yezemidlalo. Ewe, i-United Arab Emirates iyaziwayo. Umzi-dolophu uye waba ngumfuziselo wendlela yokuphila ngokunethezeka kunye neArabs ezizityebi. Iimoto zezemidlalo kunye namaflethi amaxabiso abizayo.
I-United Arab Emirates kunye ne-Dubai. Ukwakha izakhiwo zezakhiwo kunye nezakhiwo zoshishino eziphezulu. Ngokukodwa, iindlela ziba zibalaseleyo kwihlabathi. Ekugqibeleni ukuba, kwaye ukubonisa, kutheni kubalulekile ukutyelela le ndawo ?. Kubalulekile ukuqonda ukuba kukho isakhiwo esikhulu kunazo zonke emhlabeni, iBurj Khalifa.
Dubai iyakwamkela lonke ixesha. Yiba ngumbhenketha we-UAE. Ngaloo ngqondweni ukhumbule kuwe nakwi-UAE. Inhlanhla yamadoda. Kwaye ube nexesha elihle.
E-Algeria ukuya kwi-United Arab Emirates
I-Algeria ukuya kwi-United Arab Emirates kunye ne-Dubai City Inkampani. Inkampani yethu yokuqeshisa inceda abantu ukuba bafumane umsebenzi e-Dubai. Iyona nkampani ebhetele kwiAgeria
Eli lizwe elimangalisayo, i-Algeria isondele kakhulu kwi-United Arab Emirates kunye ne-Dubai City Inkampani
I-Algeria yiyinye yamazwe amanani. Ukongezelela koko, ifuna ukufuduka phesheya. Kwimeko elungileyo, ezininzi zaseAgeria zihamba. Ngenxa yokuba abafuna umsebenzi base-Algeria bafuna umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Yingakho sibanceda.
Ngakolunye uhlangothi, i-Algeria yilizwe laseNyakatho Afrika. Ukuba nabasebenzi abaninzi abaqeqeshiwe. Kodwa kukho abantu abaninzi. Ngokuqhelekileyo uthetha ngomda wonxweme waseMedithera. Kwaye kwaneentlango yaseSahara. Baya e-United Arab Emirates. Iinkampani ezininzi ziqeshisela ilizwe lawo. Emva koko abasebenzi bashukumisayo emhlabeni jikelele. E-Dubai okanye e-Abu Dhabi. Kukho neendaba ezininzi ngeli lizwe. Ipapashwe kwi-New York Times. Ngenxa yeenkampani kunye ne-CEO. Ngaba amaxesha amaninzi afakwe kwiinkampani zase-Emirates Forbes.
Jonga ngezantsi. Into esinokuyenza. I-Dubai City Inkampani inceda abathunywa belizwe. Ngenxa yokuba silindele ukufumana abaviwa abaninzi. Bamba umsebenzi e Dubai ukusuka eAlgeria. Sinika i-visa kunye nezithuba zemisebenzi.
Ibhanki kunye nezezimali
Imali yebhanki kunye nemali yeenkonzo ezipheleleyo kunye nekhokelo
Imisebenzi yasebhanki inikezela ngekhampani yedolophu yase-Dubai yakha inkqubo entsha yebhanki. Eli nqanaba lilonke malunga namacandelo ezezimali kunye neebhanki ezipheleleyo ezikhokelayo
Ibhanki enye inqanaba. Ngale nto engqondweni, iqela lethu libhalela isithuba esitsha. Ikhamphani yedolophu yaseDaibha yakha inkqubo entsha yebhanki. Eli candelo lizonke malunga namacandelo ezezimali kunye namabhanki. Abantu banomdla kakhulu kwiityala. Ngale nto engqondweni, iqela lethu liyakunceda kwaye likhokela abaqeqeshi. Kubaluleke kakhulu ukuphulaphula amehlo. Imali inzima kwaye ngakwelinye icala, ikhuthazwa. Ngokukodwa xa sithetha ngeenkampani ezinkulu. Yonke inokwenzeka kwaye inyuke intsimbi yempumelelo. Eli candelo linikezela uxanduva. Yaye ininzi yolonwabo. Zenzele umntu odala.
Njengoko kunjalo, ukupheka kunye nenkonzo yezemali, bayathandwa kakhulu. Zininzi iindlela ezikhokelela ekwenzeni imali. Kukho iinkonzo ezininzi zeenkonzo zezimali ezikhoyo kuzo zonke ezoqoqosho. Imarike yemasheya kunye nenkampani yezemali ihamba ngokukhawuleza kunabanye. Fumana ngakumbi ulwazi. Zama ukufumanisa ukuba nguwe.
Enyanisweni, akukho ndawo iindawo zeenkonzo zezimali. Into enokufumaneka, wonke umntu. Abantu abajikeleze ihlabathi bavame ukuqokelela kwiimarike zendawo. Ngakolunye uhlangothi, iibhanki ezihamba phesheya ngezoshishino. Amaziko emali kazwelonke nakwamanye amazwe nakwamanye amazwe. Ukukhula emhlabeni jikelele.
Ngakolunye uhlangothi, ukufumana ulwazi olonwabisayo luya kwenzeka nakwiinkampani zethu. Kukho iinkonzo ezibini jikelele. Iyokuqala iinkonzo zebhanki zentengiso. Yaye yesibini inkonzo yebhanki yotyalo-mali. Enye ngongoma, i-inshurensi kunye nokutshintshwa kwamanye amazwe Yingakho sisondeza kule sihloko. Ekugqibeleni, yenza impembelelo. Ngokukodwa kwiCandelo leBhanki. Inhlanhla ngeli candelo. Eli candelo lifanelekileyo. Qinisekisa ukuyijoyina.
Iingcebiso zomSebenzi zabafuna umsebenzi
Iseluleko somsebenzi kubantu abafuna umsebenzi ngokucacileyo ukufumana umsebenzi
Imisebenzi kunye noMsebenzi ocebisa abafuna umsebenzi kwihlabathi. Nsuku zonke ufuna umsebenzi. Yingakho inkampani yethu inceda abantu ukuba bafumane izikhokelo ezifanelekileyo.
Umsebenzi ucebisa, ngakumbi abafuna umsebenzi omtsha. Abafuna uYobhi kwihlabathi. Nsuku zonke ufuna umsebenzi. Yingakho inkampani yethu inceda abantu ukuba bafumane izikhokelo ezifanelekileyo. Funda isikhokelo sethu esipheleleyo kubafunayo. Ngaphantsi kwesi sikhokelo iqela lethu lihlala liqinisekile. Ukubonelela ngolwazi olunzulu. Abaqeshi ngenxa yesi sizathu bajonga abaphathi abanobuchule obuqilima. Njalo qinisekisa ukwazi izicwangciso ezilungileyo. Ngokuqinisekileyo, ukunceda abanomsebenzi abangafunwanga. Ngaphantsi kweemeko, khangela ukuba inkampani yethu inokukunceda njani. Ngale njongo, iqela lethu lidale eli candelo.
Ukufumana umsebenzi ochaphazelekayo wamazwe ngamazwe. Iimfuno zokuphucula uphando olugqwesileyo. Ukuphuhlisa idumela lomsebenzi wokuphuthuma. Olunye icebiso, ukubeka enye indlela, zama ukuziphatha ngokukhawuleza. Njalo uzama ukusebenzisa okuphambili. Abafunayo uYobhi ngokwenene bazama ukufikelela kubaqeshi. Ngakolunye uhlangothi, inkampani yethu ikunika impendulo efanelekileyo yokufumana umsebenzi. Isifundo esibalulekileyo kunabo abafuna umsebenzi. Ukuthetha ngokubanzi, ukwazi indawo zokuthumela kwakhona kwakhona.
Bonke abaqeqeshiyo bahluke. Kule meko, gcina ingqondo yakho ivulekele kwiingcamango ezintsha. Abo bakwenza abantu baphumelele. Ukufuna umsebenzi akulula. Thatha uphando lwakho lomsebenzi oluphumeleleyo. Ngenkampani yethu, unokuyenza. Izikhokelo zethu zinika umgaqo wegolide.
IiNkampani ezithumela kuwo wonke umhlaba
Iikhampani ze-Dubai ezizithumela kuwo wonke umhlaba nge-Gulf Jobs.
Iinkampani ezithumela kuwo wonke umhlaba kunye neNgingqi yeGulf. Sinikeza iinqununu ezintle ezichanekileyo nezichanekileyo zolwazi malunga neefemu kunye nemibutho
Iinkampani kwihlabathi lonke. Ngale ngqondweni, inkampani yethu yenza uluhlu lweenkampani eziphawulekayo. Uninzi lwamafemu alungiselelwe kwiGulf Area. Kodwa ngakolunye uhlangothi, unokufumana enye imibutho eminye.
Ubungcali bethu beblog e Dubai. Ukubhala ulwazi, ngokukodwa kwiinkampani, amafemu aphakathi, kunye nakwiimeko ezithile ezincinci imibutho. Inkampani yethu inikezela ngolwazi olungakumbi malunga nenkampani. Ukulawula nokusebenza kwenkampani nganye. Kanye kunye neentlobo zamaqumrhu ebhizinisi. Iinqununu zethu zolwazi zichanekile. Kwilizwe ngalinye nakwiinkampani.
Injongo yethu ephambili kukubonelela ngolwazi olungcono kakhulu. Ngale nto engqondweni ukongeza iingxelo kunye neenkcukacha zolwazi. Kanye kunye nolwazi lwewebhusayithi kunye neskrini-skrini.
Ngoko, ukuba ufuna ulwazi olunzulu. Ngokukodwa malunga neefemu. Nceda ujonge ngaphantsi. Ngokuqinisekileyo usebenzisa ulwazi lwethu. Isikhokelo esihle sinolawulo. Inkampani yethu inceda amafemu. Kwaye ngakwelinye icala, kunceda abantu abaqhelekileyo. Ukuqokelela ubungqina obucacileyo kunye noxinzelelo. Njalo qiniseka ukuba uhlolisise ukuhlaziywa okutsha. Ngenxa yokuba sibhala umxholo omtsha. Nganye ngeveki enye.
Imisebenzi yeGulf ivulekele abafuna umsebenzi. Kwaye ininzi lwabaqeqeshi bayazi. Ngoko, qho qinisekisa ukuba usebenzisa i-firmest firm in the Gulf Region. Injongo yethu kukubonelela ngeendaba ezinzulu. Ngokukodwa kwiinkampani ezikhulayo emhlabeni wonke.
I-Dubai City Inkampani inceda ukuphuma
I-Dubai City Inkampani inceda ekuphumeni ukufumana umsebenzi e-Dubai
I-Dubai City Inkampani yenye yeyona nto ibhetele phakathi kwabaqashi be-UAE. Sebenzisa iinkonzo zethu zokuqesha. Siye sinceda amaxabiso okufumana imisebenzi e-Dubai
Iqela lethu leengcali likunika ngokwenene ulwazi lwenkqubo yokufuna umsebenzi. Eyona ndlela ingcono yokusetyenziswa kwabasebenzi basekuhlaleni. Njengokuba kunjalo, i-Dubai City Inkampani iye yanceda abasebenzi belizwe langaphandle. I-Face ijongene nokufikelela kumaqela angamawaka amabini ama-Middle East.
Ingcali yethu yokuqeshisa ingcali kunye nabaqashi e-United Arab Emirates. Imizekelo emihle yeenkonzo zethu zobugcisa. Ngaba ukuqeshisa umhlaba jikelele. Ukususela kumabhunga afana nawo. Qatar, i-Saudi Arabia kunye ne-Kuwait neYiputa. Kuzo zonke iindawo, abasebenzi basekuhlaleni bayakwazi ukuqashwa.
Abathunywa baya kukwazi ukufumana umsebenzi. Kufuneka sikhunjulwe ukuba asikho nje kuphela ekhokela abafuna umsebenzi behlabathi. I-Dubai City Inkampani ngokubeka abasebenzi abangaphandle kwamanye amazwe. Abasebenzi baseNdiya, abahlali baseMzantsi Afrika nabaqeqeshi basePakistan. Ngakolunye uhlangothi, sinceda ekufumaneni ngubani oqeshisayo empuma. Ngenxa yecandelo lethu likwazisa umviwa kwi-Emirate yaseUnited Arab. Ukuqiniseka ukuba abaphathi kunye nabasanda kuthweswa iziqu banomsebenzi ofanelekileyo.
Izikhokelo zokufumana umsebenzi e-Dubai
Abafuna imisebenzi bafumana ulwazi oluxabisekileyo. Esi sishwankathelo sibheke ngaphantsi kwaye sijonge iposi yethu yeposi. I-Dubai City Inkampani yenza ukuba kufinyeleleke. Ukusuka kwihlabathi lonke.
Abantu basePhilippines basebenzayo basebenzisa iinkonzo zethu ngempumelelo. Ngaloo nto engqondweni phantse nabani na abaphathi. Ngokuqinisekileyo uya kulawula uncedo. Abaqeshi kwakunye nokuqeshwa kwabaphathi. Ukufumana ixabiso ngokusebenzisa iinkonzo zethu zenkampani. Ngakolunye uhlangothi, sisebenzisana noRhulumente.
Inkampani yedolophu yase Dubai ibaluleke kakhulu. Ngokukodwa abafuna umsebenzi ngaphandle.
Iwebhusayithi ye-Dubai imisebenzi
Iwebsite ye-Dubai imisebenzi yokulayisha i-resume kwaye ufumane umsebenzi
Iwebhusayithi yomsebenzi kunye namathuba omsebenzi wekhokelo lokufundisa. I-Dubai City Inkampani elawula ulwazi olunzulu ukuze ulayishe i-resume kwaye ufumane umsebenzi
Indawo ye-Dubai imisebenzi yokufumana umsebenzi omkhulu. Ukuba ukhangele ukuba wenze impembelelo kumsebenzi wakho. Sebenzisa i-Dubai City Compay. Iwebhusayithi yezobugcisa iyona mthombo omkhulu wezithuba zase Dubai. Sibhala ngewebhusayithi e-Dubai. Ukunceda ukuchitha ixesha lokukhetha ukhetho olufanelekileyo. Ngaphantsi kwezo meko, jonga ngaphantsi. Inkampani yethu ibhala amanqaku amaninzi. Kuzo zonke izinto ezicingelwe kukunceda ufumane umsebenzi wokuphupha. Kungenxa yokuba izithuba zomsebenzi zizona zilungileyo.
Iindwendwe ezintsha zifudukela e-Dubai. Ngokona nxalenye, i-Dubai City Inkampani idlala iinkonzo zenguqu zokuguqula. Inkampani yethu kule manqaku inika ulwazi oluxabisekileyo. Enye yazo iifowuni zokuqashwa. Ngakolunye uhlangothi, indima yabazingeli bemisebenzi ingafumaneka kwi-intanethi.
I-website ye-Dubai imisebenzi ayikho kuphela yabasebenzi. Ngale nto engqondweni, iqela lethu lenza ulwazi malunga nezikhundla zengqesho. Kwezinye iimeko, sibukeza kunye neengcaciso zolwazi. Ngokukodwa ngubani oqeshwe kwi-United Arab Emirates. Nceda uqonde indlela onokufumana ngayo umsebenzi eMbindi Mpuma. Ingakumbi e Dubai. Ngenxa yenkunzi enkulu e-UAE. Yiba ngaphezu kokudumileyo kubafunayo.
I-website ye-Dubai yokufumana umsebenzi
Uninzi lwabafunayo kwi-Emirates. Yonke imihla ifuna i-career ehlawulwa kakuhle. Ukhulula ukukhangela umsebenzi phesheya e-Dubai. Ngokukhawuleza okanye emva koko uzame kwaye uphinde uphinde uphume kumazwe angaphandle. Ukulawula nokuthumela izicelo kwi-Emirates. Njengoko kuboniswe ngasentla, iba yinto ephambili ekuphenyweni kwezemisebenzi.
Izitulo zeJob ezinika ithemba kubaqeqeshi. Ukubanceda batshintshe indawo yokusebenza ukuba ibe ngcono. Ngaphantsi apho ungakhetha kwizinga eliphezulu lokuhlawula. Okanye iziqinisekiso eziyimfuneko. Ukuba siyaqhathanisa nabaqashi, apho ungayenza khona. I-website ye-Dubai imisebenzi ycono kakhulu.
Urhulumente wase-United Arab Emirates. Ukunceda iisayithi zomsebenzi ukuqhubela phambili iteknoloji yokuqesha. Ngaloo nto ngqondweni udala amathuba. Ukuze iinkampani zamazwe ngamazwe zikhule kwi-UAE. I-Bayt kunye neCourerjet yenye yezona ziyaziwayo e Dubai.
Kuze kube ngethuba langoku, maziswe kakuhle malunga nenkampani yethu. Zama ukusinceda kwaye wongeze i-CV yakho. Kwiinkampani ezingezantsi. Yenza iprofayili yakho ifumaneke ngokupheleleyo kumazwe angaphandle. Kwaye ekuhambeni kwexesha, ube ngumhlali ovuyayo kwi-Emirates.
Ingqesho e Dubai
Ingqesho e-Dubai inkulu-dolophu yase-United Arab Emirates
Ukuqashwa kunye neNgqesho e Dubai ngenxa yokufuna umsebenzi. Fumana umsebenzi kwi-capital of the United Arab Emirates. Iinkcukacha zokuqeshisa iinkampani kunye nabaqashi.
Ingqesho e Dubai ngokufuna abafuna umsebenzi. Inkampani yethu inceda abanomsebenzi kumazwe ngamazwe. Ngenjongo yokufumana umsebenzi. Iqela lethu lenze iiblogi eziliqela. Akukho kuphela i-Dubai City Inkampani enceda. Ukufumana umsebenzi e-Dubai. Kukho ezinye iinkampani ezinokuqeshisa. Inkampani yethu ilawula ukuhlaziywa kunye neengcaciso zeenkcukacha. Kule meko, unokwenza umsebenzi.
Ngaphantsi kwezo meko, nceda ujonge kwiblogi yethu. Ngenxa yokuba sinika umzekelo obalulekileyo ngokwenene wokufumana umsebenzi. Ngale ngqondweni, ngamnye umcebisi wethu. Ukuzama ukubonisa indlela yokuphumelela kwimpumelelo.
Abafuna umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Ininzi yabantu abafuna umsebenzi kwi-UAE. Kwaye oku ngqondweni, ukhetha isixeko esilungileyo. Ngakolunye uhlangothi, inkunzi ye-UAE. Zithandwa kakhulu kwi-UAE. Abaqeshi bafuna abafuna umsebenzi. Into yokuqala yokukhumbula indlela yokufumana ngayo.
Ngoko, njengomfunyi womsebenzi. Thatha ithuba ngeliqela lethu. Kwaye inxalenye enkulu, jonga into esinokuyenza. Ngokukodwa ukukhangela umsebenzi kwi-UAE. Ngezantsi unayo amanqaku. Kwaye baya kukuqeshisa ngomsebenzi e-Dubai. Abafuna umsebenzi onenhlanhla. Ndathemba ukukubona kwakhona.
Iifayile zokukhangela eziphezulu
Iifom ze-Search Search - Inkxaso yokuHlola uYobhi ngeqela elihle le-HR!
Iifayile eziphambili ze-Search eYurophu, eMiddle East nakwi-Internally. Sinobuchwepheshe bokuzingela umsebenzi ngokuzithengisa ngeqela elihle le-HR!
Iifom zenkqonkqo zoPhando ziqeshwe ngokubanzi eDaibha city. Ngale nto engqondweni yethu kwinkampani ekunceda abantu ukuba basombulule iingxaki zabo. Umbutho wethu uye wakwazi ukudala uncedo lophando lwemisebenzi. Kwaye sinika isikhokelo esibalulekileyo kakhulu seBasebenzi kwihlabathi jikelele. Ngoko ukuba ufuna amathuba emisebenzi engcono. Ngokuqinisekileyo kufuneka ukhangele iinkonzo zethu zenkampani kubasebenzisi beJob.
Amathuba emisebenzi emihle kakhulu yinkampani ephezulu yokuqashwa. Inkampani yethu yenza inqanaba kule minyaka elandelayo kunamakhulu amaninzi e-arhente zokuqasha emhlabeni jikelele. Apho ngokwenene sinokukunika umsebenzi oxabisekileyo. Kwaye sikwazi ukuwabeka endaweni enye kukunceda ufumane ulwazi oluxabisekileyo.
Ngoko unjengomntu okhangele igosa eliphezulu lokuqeshisa abasebenzi abanokufumana ulwazi olungakumbi. Ukusuka kwiMandla ukuya kwi-DHR ngamazwe kunye nokukhangela umsebenzi wokufuna umsebenzi kunye nee-arhente zokuqesha kwihlabathi lonke. Ngokuqhelekileyo, njengoko sonke siyazi ama-agent amahle eholide asekelwe kwiDolophu yaseDaibha kwaye kunjalo e-Abu Dhabi.
Abaqashi baseMiddle East
Ngoko, inkampani yedolophu yaseDaibha iye yakwazi ukuhamba ngale ndlela kwaye ikunike isikhokelo esona sikhokelo somsebenzi wehlabathi jikelele. Kufuneka wenze ntoni ngokwenene ngumthwalo onzima nje oluhlu lwabaphathi abaqeshwe ngokutsha. Ngenxa yokuba isebe lethu labasebenzi lisoloko licebisa abantu kubhulogi yethu. Ngokomzekelo, sithumela ulwazi olunomdla kwiilwimi ezahlukeneyo. Ngoko abantu abavela kulo lonke elase-Asia-Middle East kunye neYurophu banokufumana ulwazi olufanelekileyo malunga ne-Dubai imisebenzi.
Ngakolunye uhlangothi, sizama ukucebisa nokunika iingcebiso malunga nendlela yokufumana umsebenzi eMbindi Mpuma. Ngenxa yokuba siyiinkampani ezilawula le ndawo kwaye igama lethu liyaziwa phezulu apho. Ngoko uya kufumana ulwazi olulungileyo nolungileyo malunga nendlela yokufumana umsebenzi eKatar ukulinda kunye ne-Saudi Arabia.
Singabantu abaphathi abaphezulu kwaye sihlala silinde abafuna umsebenzi omtsha abaza kujoyina inkampani yethu kwaye baya kubhalisa i-CV. Ngale ndlela usinika uncedo lwemfundo. Kuba emva kweminyaka emininzi yentsebenziswano siyazi ukukuthayipha ngakumbi nakumaMbindi Mpuma.
Cacisa ukuba Ungaba njani na?
Phuma, ngokuyininzi, abantu bayazi kakuhle. Kuphela nje umntu ofuna umsebenzi ngaphandle. Okanye sele sele esebenza kwindawo ehlukile kunelizwe lakubo. Kukho izizathu ezininzi. Abanye abantu bafuna umsebenzi ngaphandle ukuze benze imali. Ngakolunye uhlangothi, abanye abaphathi bafuna umsebenzi ukuphakamisa imigangatho yabo. Iimeko zokuhlala ngokukhethekileyo. Yingakho abantu bebafuduka.
Kwabanye abantu abasebenza kwamanye amazwe banentsingiselo ekhethekileyo. Kha wuleza uzame ukuba ngumfuphi ngenxa yezizathu zomsebenzi. Kwiimeko ezininzi. Ezinye zeengcali ziwela kulo msebenzi kunye nendawo entsha. Unokuba ngumntu omtsha. Okanye utshintshe indawo. Konke kufikelele ekubhekiseleleni kwintetho.
Ngakolunye uhlangothi, uninzi lwabantu. Usalindele ukukhokelwa kobugcisa. Ngale nto engqondweni, i-Dubai City Company ibhala isithuba seblogi. Sihluke kwezinye iwebhusayithi. Ngenxa yokuba sinika iinkcukacha ezipheleleyo iinkcukacha. Kunokuba nje iindlela eziqhelekileyo. Iqela lethu licebisa kwaye likwazisa ngokuphila kwangaphandle. Iqela lethu libhalela ngokubanzi iinkcukacha. Kwaye sizama ukugcina zonke izinto ezicatshangelwayo. Kwaye kwakuqhele ukuhlala phesheya kwezilwandle.
Yiba ngumsebenzi kwaye usebenze kwelinye ilizwe
Kubalulekile ukuphawula ukuba abaninzi abantu bangaba ngumhloli womsebenzi wehlabathi jikelele. Abantu batyelela amanye amazwe. Nangona kunjalo, kungekhona kwizigqibo. abafudukayo baya kuba ubomi babo. Kungakhathaliseki isizathu sokuba uhambe kwamanye amazwe.
Ngesikhokelo sethu, unokuba ngumntu ohamba phambili. Iqela lethu lenze le khokelo yabasebenzi be-expat. Ininzi yolwazi iqulethe yonke into oyifunayo ukuba uyazi xa ushukuthela phesheya. Ngale nto engqondweni, musa ukuchitha ixesha lakho kwaye ujonge ngaphantsi. Ngenxa yenkampani yase-Dubai idolophu ekulungele ukukunceda ube yi-expat.
Indlela Yokuba Ngomnye Wabo Ezweni Lwam
Cacisa, kukho izizathu ezininzi. Abanye abantu bafuna umsebenzi ngaphandle ukuze benze imali. Abanye abaphathi bafuna umsebenzi ukuphakamisa imigangatho yabo
BasePhilippines base Dubai
Ngoku abasebenzi basePhilippines bafumana umsebenzi e-Dubai - Fumana umsebenzi omhle kwi-United Arab Emirates.
BasePhilippines base Dubai. Fumana ulwazi olunzulu kwaye ufumane umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Ukusuka ePhilippines ukuya e-Dubai okanye e-Abu Dhabi
Abasebenzi basePhilippines baseDaibhi, bahlaziywa kakhulu. Zininzi iinkampani eziqeshayo. Ngenxa yezinto ezininzi ezifanelekileyo zokusebenza kunye. Ngoko, ngakolunye uhlangothi, ube ngenye yazo. Zama ukuthatha umsebenzi kunye nenkampani yethu e-Emirates. Iqela lethu liyakunceda ukuba ibekwe. Ngokukodwa eMbindi Mpuma. Ngakolunye uhlangothi, iqela lethu liyakunceda neGulf Jobs.
Abafuna uYobhi baseFilipi beza e-Emirates. Ngale ngqondweni, iqela lethu likukhokela. Abaqhelekileyo basePhilippines abasebenzi. Ngaba isizwe sithathu sisebenza ku-UAE ?. Emva nje kwabasebenzi baseAsia. I-Dubai City Inkampani inceda uncedo. Kwaye isi sikhokelo senziwa ngokukhethekileyo kubantu basePhilippines. Ngale ngqondweni, jonga indlela esinokuyilawula ngayo. Uphando olutsha lomsebenzi.
Njengoko i-expat izama ukwenza umsebenzi wegram. Layisha kwakhona kwi-Dubai City Company. Ube ngumntu onoyolo kwi-United Arab Emirates.
Ulwazi lweGoogle Dubai
Sinika i-Google Dubai Guide. Kwaye isikhokelo esipheleleyo malunga nendlela yokufumana umsebenzi kwi-IT.
I-Google Dubai isiqulatho esipheleleyo malunga nendlela yokufumana umsebenzi kwi-IT. Abantu bafuna umsebenzi kwi-UEA. I-Google inikeza imisebenzi emininzi. Fumana indlela yokuqalisa.
Ulwazi lwe-Google Dubai kubantu. Zonke malunga nale nhlangano yezigidi zeedola. Ukuba ufuna ukufumana okungakumbi malunga neenkampani ze-Google kunye ne-IT. Iinkampani eziphambili zifuna ukuhlolwa okulungileyo. Ngaphantsi kwezo meko, ukuba ungathanda ukusebenza ku-Google. Ngezikhokelo zethu, ekuhambeni kwexesha, iziphumo zifumana ulwazi olwaneleyo. Ngokuqhelekileyo, inkampani yethu inikeza isikhokelo esiphezulu se-IT career.
Inkampani yeGoogle yintlangano yezigidigidi. Ngakolunye uhlangothi, ukuqesha amawaka emisebenzi. Ukuvelisa imali engenayo ngokubanzi phantse kuwo onke amazwe. Ngaloo nto engqondweni, kulungile ukuba ukhangele le ntlangano.
Inkampani yethu ihlala ihlolisisa kakuhle ngeofisi zeGoogle Dubai. Ngenxa yokuba sithanda oko iGoogle eyenzayo. Ingcali yenkampani yaseDi Dubai elawula iposi yeblogi. Amaninzi amaninzi ngonyaka. Ngaphantsi kwezo meko, jonga ngaphantsi. Nceda nceda ufumane ezininzi malunga neGoogle. Kutheni bahamba phambili. Baqesha njani? Nendlela yokuphatha indlela eya kubo.
Ulwazi olunolwazi lukaRhulumente
Ukusuka kubemi bendawo ukuya kwi-Internationals. Bonke abasebenza kuRhulumente banelungelo. Ngale nto engqondweni, sibeke isigaba esitsha. URhulumente uhlalutye ngokubanzi. Ngaphantsi kweemeko, sinceda abantu ukuba bafumane ulwazi oluninzi.
Inkampani ebhaliweyo yase-Dubai malunga nesi sihloko. Kungenxa yokuba kubalulekile ukuba sijonge amanqaku ethu. Urhulumente unika imvume yenkqubo okanye iqela labantu. Iiwebhsayithi ezidumileyo. Ngaba ngabaphathi abasemagunyeni. Ewe, lowo sivumelana ngokubhala ngaye. Ibhunga elihlekileyo kuluntu. Ngaba konke malunga neqela labantu. Iinkampani zidla ngokushishino kwishishini.
Kwimeko yokuqokelela ulwazi oluninzi malunga nenkampani ye-gov. Ingcaciso ecacileyo, inkcazo yayo yobanzi yokuqinisekisa. Iinkampani eziqhutywe ngokuqhelekileyo ziquka i-legislature. Ngaphezu koko, ulawulo kunye nomsebenzi. Inkundla entsha inceda imibutho. Ngoko qiniseka, sifunda isikhokelo sethu. Ngaphantsi kwezo meko, zama ukusebenzisa isikhokelo sethu. Njengokuba kunjalo, inkampani yethu ikunceda. Jonga ngezantsi. Ithemba sinikeza ixabiso kuwe. Ngale nto engqondweni, siya kukuphatha.
Enye yemizekelo yethu iqela libonelela. Kuphi na ukufikelela kulo mvume. Ukuthemba abantu ukuba bafumane ulwazi olunzulu oluchanekileyo. Umnqweno omhle. Ngale ngqondweni, sikubone kwiblogi yethu. Siyabhala, zichanekile ngeGov. Ngoko ekugqibeleni, akubone ngokukhawuleza.
Ulwazi olusisiseko lukaRhulumente oluvela kwi-Dubai City Company
Ulwazi olusisiseko lukaRhulumente oluvela kwi-Dubai City Company. Ngaba u-expat kwaye ufuna i-Gov ezifanelekileyo. Jonga ngaphantsi kwinqaku lethu
Isikhokelo Sokusebenza E-Dubai
Isikhokelo sokusebenza e-Dubai kubasebenzi bamazwe ngamazwe. Iqela lethu leengcali. Ukubhala amanqaku okuthengisa. Ngoko, phantsi kwezo meko, zama amacebiso kunye neengcebiso zethu. Ngenxa yokufumana abaqeshi kwi-Emirates yinto esenza ngayo.
Iqela lethu likhokela abaphathi ababonelele ngala maqondo e-Dubai nase-Abu Dhabi. Abasebenzi emhlabeni wonke. Ukujonge phambili ukufudukela e-Dubai. Kwimeko elungileyo, inkampani yethu inika uncedo kubantu abafuna umsebenzi.
Isikhokelo Sokusebenzela E-Dubai kunye neengcebiso ezicacileyo kubasebenzi bamazwe ngamazwe. Ngenxa yesi sizathu, kufuneka ufumane iingcebiso kunye neengcebiso. Abafuna umsebenzi omtsha kunye nabakhoyo abafumana umsebenzi kunye nenkampani yethu. Ngoko kufuneka uzame iinkonzo zethu kwi-United Arab Emirates.
Ukuphila nokusebenza e-Dubai. Ngokuqinisekileyo, ngelixa uhamba kwi-UAE. Unokuba ngumnye wabasebenzi abahlawulwa kakhulu. Njengokuba kunjalo, umsebenzi omnandi onokubakho ungenzeka kuphela e-Dubai.
Enye into ebalulekileyo ebomini bakho. Ingqesho eMbindi-Mpuma zifanelekile ukuba zihambe. Nangona kunjalo, ukuhamba nokuhlala kwi-Emirates. Ukuthatha ixesha kunye nemigudu. Ngale ngqondweni, sibhala esi sikhokelo kuwe.
Ukusebenza eDaibha njengesiza
Ukufudukela kwelizwe elitsha. Ngokukodwa kwilizwe lamaSilamsi linokuba ngumsebenzi onzima. Ngenxa yezinto ezisuka kumhlaba wonke. Bonke baya e-Emirates emsebenzini. Ngokukodwa xa ulawula ukungabikho kolwazi olusebenzayo.
Inkampani yedolophu yase Dubai iyazi ukuba izinto zenziwa njani kwiindawo zasekhaya zaseDaibha zingenza enye yezona zinto zinomdla kakhulu ebomini bakho. Nangona kunjalo, ukuhamba nokuzinzisa kwilizwe elitsha kunokuba nzima ngakumbi xa ungenalo ulwazi olululo ukuba izinto zenziwa njani kuMbindi Mpuma. Iinqununu eziziinkcukacha ngokubanzi zenkampani yase-Dubai zihlanganisa zonke iindawo zokuqashelwa kwi-UAE. Ngenxa yokuba ukuhlala nzima kwiDaibha kunokuba yinto enzima kakhulu.
Nangona kunjalo, ukuhamba nokuhlala kwisixeko esibiza kakhulu njenge Dubai. Ekuqaleni kweendleko zexabiso. Abanye babantu abafuna umsebenzi abalawulayo nokulwa nabo ekuqaleni. Uninzi lwabafundi bafuna isikhokelo sokusebenza e-Dubai. Ngenxa yokuba ilizwe elitsha linokukwazi amava okuthusa. Ngokukodwa xa besuka kumazwe angaphandle. Ngoko ukuphelisa ukuba, jonga kumanqaku ethu. Yifunde ngentshisekelo. Uze ufumane umsebenzi kwi-United Arab Emirates.
Isikhokelo Sokusebenzela E-Dubai kunye neengcebiso ezicacileyo kubasebenzi bamazwe ngamazwe
Isikhokelo Sokusebenzela E-Dubai kunye neengcebiso ezicacileyo kubasebenzi bamazwe ngamazwe. Ngolwazi lwethu, uya kufumana indlela yokufumana umsebenzi e-Dubai.
Imisebenzi yeGulf kunye nokukhangela umsebenzi
Imisebenzi yaseGulf kunye nokusebenza kwamanye amazwe kubafunisi bezemisebenzi kumazwe ngamazwe
Umsebenzi kwiNgingqi yeGulf kwaye usebenze kwamanye amazwe kubafunayo belizwe jikelele. Njengoko kunjalo, umsebenzi kwi-gulf indawo yesihloko esilandelayo kwiblogi yethu
Imisebenzi yeGulf iyona nto iphambili ekujoliswe kuyo. I-Dubai City Inkampani ngokuqinisekileyo inikezela oku. Ngakolunye uhlangothi, abafuna umsebenzi abaphambili abafuna umsebenzi. Ukuza kuzo zonke i-continent. Evela eNdiya nasePakistan kunye nase-US Canada naseTurkey. Bonke bafuna umsebenzi kwiGulf.
Imisebenzi yaseGulf kunye nokusebenza kwamanye amazwe kubafunayo belizwe jikelele. Njengoko kunjalo, umsebenzi kwi-gulf sisihloko esilandelayo. Kukho iindlela ezininzi zokufumana umsebenzi kwiNgingqi yeGulf. Ukuyibeka ngenye indlela, unokufumana izikhundla zephupha kwiizwe ezininzi zeGulf.
The AmaArabhu asePersian Gulf. Ngaba luyathandwa kakhulu ekukhangekeni komsebenzi. Ngenxa yokuba kukho amazwe asixhenxe aseArabhu angumda wePersian Gulf.
Ngale ngqondweni, unokwenza uphando ngezikhundla. Amazwe angcono kakhulu aseGulf. Umzekelo kumsebenzi waseBahrain, unomdla kumsebenzi wabathengi. Ayikho imisebenzi eninzi e-Iraq ngaphandle kweziseko.
Ngakolunye uhlangothi, kunye nesikhokelo sethu, uya kuba nophando olunzulu. Enye yemimiselo i-Kuwait ne-Oman imisebenzi yeebhanki. Apho unayo iKatar kunye ne-Saudi Arabia kunye IUnited Arab Emirates (UAE).
Ngezo ndawo zonke ezimangalisayo, unokwenza uphando. Kwaye ngokuqinisekileyo inkampani iya kukukhokela. Iqela lethu labasebenzi ababhalisayo ulwazi lokubhala. Jonga ngaphantsi kwaye ufunde isikhokelo sethu seblogi. Inkampani yedolophu yase Dubai ilapha ukukunceda. Abafuna umsebenzi onenhlanhla.
Isikhokelo soNyango lwezeMpilo kwiiDktara, abahlengikazi kunye nezibhedlele
Sinika ulwazi malunga neKhokelo loNcedo lweMpilo kwiingcali, oongikazi kunye nesibhedlele. Iingcali zifuna ulwazi olunzulu. I-Dubai City Inkampani ehambisa amanqaku.
Unonophelo lwempilo, isikhokelo esicacisiweyo seengcali zangempela. Ikhamphani yedolophu yase Dubai ilawula amanqaku athile. Ngale nto engqondweni, sinceda abantu. Ukufumana ezo mphononongo ezichanekileyo zingakunceda. Fumana indlela entsha ebhizinisini. Kukunceda ufumane ugqirha okanye abahlengikazi abaqeqeshiweyo.
Olunye uhlobo olunomdla kunye neBrazil Blog. Eyona nto eyenziwe ngokukodwa ukuze i-nursery. Kanye kunye noogqirha omnye obenxulumene nabasebenzi basezibhedlele. Amacandelo ethu okhathalelo lwempilo onothando. Ngenxa yokuba unokufumana uninzi lwabaqeqeshi bezempilo. Ukusuka kubafunayo bemisebenzi kunye nokuqesha abaphathi. Ukufikelela kwizibuyekezo ngezibhedlele.
Izibhedlele ngasemva, banomdla kwishishini. Umzekelo omnye wezona zinto zilungileyo kuMbindi Mpuma. Iingcali ziya eMiddle East. Kwaye ngakwelinye icala ungenalo ulwazi olwaneleyo. Yingakho sinika isikhokelo. Ukuze unyango lwempilo, oogqirha unyango kunye nezibhedlele.
Nceda ujonge ngaphantsi. Yaye masikukhokele. Fumana ulwazi oluninzi malunga nophatho lwezempilo. Yaye ube yincwadi yethu yokufunda. Ngaphantsi kweemeko, siyakumema. Umhlaba webhedlele ngamanye amagama, ufanelekile ukutyelela.
Isikhokelo seehotele kunye nolwazi
Isikhokelo seehotele kunye nokuphononongwa ngolwazi malunga nenkampani
Sinika ulwazi malunga nesikhokelo seehotele kunye nolwazi, ukuhlaziywa kweengcali malunga neenkampani. Inkqubo yokwenza izibhedlele zezobhedlele kunye nazo zonke ngeehotele
Isikhokelo seehotele kunye nolwazi lokubamkela izihambi. Sibanceda abantu ukuba bafumane okungakumbi malunga nezoshishino zabasebenzi. Ungaqhubeka njani nale nkcazelo yecalamente. Ngaphantsi kwezo meko, i-Dubai City Company ibhala izithuba zeblogi ezinzulu.
Abantu bafuna i-intanethi ngolwazi. Omnye wabo izibhedlele zezibhedlele. Inkampani yedolophu yase Dubai. Ingcezu yolwazi oluxabisekileyo ngeehotele. Inkampani yethu isoloko isinceda abantu. Ngokukodwa, ngeendaba ezihlaziyiweyo kunye nokuhlaziywa.
Ngokuqhelekileyo, sizama ukukhupha umhlaba jikelele. Ukusuka eYurophu ukuya e-UAE. I-Canada kunye ne-Australia ukuya eMiddle East. Ngale nto engqondweni, sijonge ukukunceda. Ngona nxalenye enkulu, sibhala ngokukhangela umsebenzi. Ngexesha elide, jonga iinqaku zethu. Sisoloko sinika amabali abalulekileyo. Ngenxa yokuba izikhokelo zethu zenziwa ngabantu. Kanye njengawe nawe. Kwaye asizange siphele. Ngethuba nje sinesihloko. Sibafihla. Iiblogi ezihamba phambili zinabameli abafanelekileyo. Yingakho sijolise kakuhle.
Indiya Iinkcukacha kubasebenzi abafuna umsebenzi
I-India Ulwazi malunga nabafuna umsebenzi we-Asia. Fumana indlela yokufudukela e-Dubai. Ukubhalwa kweenkampani zase-Dubai kubasebenzi baseIndiyaIndia Ulwazi malunga nabafuna umsebenzi we-Asia. Fumana indlela yokufudukela e-Dubai.
Ukubhalwa kweenkampani zase-Dubai kubasebenzi baseIndiyaIndia Ulwazi malunga nabafuna umsebenzi we-Asia. Fumana indlela yokufudukela e-Dubai. Ukubhalwa kweenkampani zase-Dubai kubasebenzi baseIndiya
Ulwazi malunga neIndiya. Amathuba amaNdiya e-Dubai. Ivela kwiIndiya ukuya e-Dubai. Konke oku kuluhlu lwethu. Uninzi lwabantu behlabathi lonke befuna umsebenzi. Ngokukodwa abafuduka baseNdiya. Bafuna umsebenzi kwi-United Arab Emirates.
Inkampani yethu yokulawula nokukhokela. Ngale nto engqondweni, ukuba namava amahle eMbindi Mpuma. Ngokuqinisekileyo yenza ukuba ube ngumsebenzi onokwenzeka. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ufuna ukufuduka. Inkampani yedolophu yaseDaibha yinguqulelo lomdlalo kuwe. Njengokuba kunjalo, ukukhangela umsebenzi kuthatha ixesha. Yingakho inkampani yethu inceda ama-Asian expats ukuba athuthele kwi-United Arab Emirates.
Abasebenzi baseNdiya bangenye yezona zilungileyo. Kwaye kwakhona, enye yezona zidume kakhulu kwi-UAE. Kwakhona abanye babo basebenza eKwait, eSaudi Arabia naseQatar. Ngokuqhelekileyo uthetha kwiiGulf zelizwe lonke. Ngoko, kufuneka ufunde izikhokelo zethu ze-Asia expats.
Inkampani yase-Dubai City iya kukubonisa indlela. Ukusuka kwiVisa kunye nokufudukela e-Dubai. Ukufikelela kwindlela yokufumana umsebenzi e-Dubai esuka eNdiya. Yaye fumana umsebenzi e-Dubai.
Udliwano-ndlebe Ngomsebenzi Waphandle
Udliwano-ndlebe kumsebenzi wasemaphandleni ufumane ulwazi olungakumbi
Inkqubo yodliwano-ndlebe yokusebenza kwamanye amazwe. Fumana okunye malunga nendlela yokulawula indlela yokuqala yobugcisa kunye nomqeshi ozayo. Izicelo kunye neengcebiso zokuthengisa.
Udliwano-ndlebe lubaluleke kakhulu. Ngaphandle kwayo, awukwazi ukwenza umsebenzi. ngaphandle kokuba unxibelelwano oluqinileyo. Inkampani yethu ibhala isikhokelo esiphezulu kubantu. Ngale nto engqondweni, siye sakha uluhlu olutsha. Inkqubo yodliwano-ndlebe yokusebenza kwamanye amazwe. Kwimeko efanelekileyo, esi sihloko asikho nzima ukuba sidlule. Konke okufuneka uyenze ngokwenene kukuba ukwazi indlela yokujongana nayo. Udliwano-ndlebe yinkqubo enzulu.
Uninzi lwabantu. Ukujonge phambili ukudlulela Inkqubo yodliwano-ndlebe yokusebenza ngaphandle kwamanye isikolo sethu sikhokelo, unokufumanisa indlela yokuthetha xa usebenzisa indawo. Ukuthintela nokuthetha ngongcali kubalulekile ekuqeshweni.
Fumana okunye malunga nendlela yokulawula indlela yokuqala yobugcisa kunye nomqeshi ozayo. Izicelo kunye neengcebiso zokuthengisa. Ngokukodwa ukuba ulunge ngakumbi kufuneka usifunde isikhokelo esicacisiweyo. Ngakolunye uhlangothi, ukuba unemfundo. Isikhokelo sethu siya kukunceda ukuba wazi kakuhle. Amava aphambili ekujongene nawo ubuso bubuso. Ngelishwa, akubona wonke umntu ukhululekile nalo.
Yingakho iqela lethu likukunceda ukuba udlule kulo. Kungenxa yokuba ukuba uyiphatha kakubi. Ngaphezu koko, awazi ukuba ungalungisa njani. Funda ulwazi lweblogi yethu. Fumana ulwazi oluyimfuneko. Yaye yenza ukuba kwenzeke.
Imisebenzi e-Dubai 2019 kunye ne-2020
Imisebenzi e-Dubai 2019 kunye ne-2020 kubahlali basemzini nabemi base-UAE. Eli candelo lithetha ngokubanzi. Ngendlela yokufumana umsebenzi e-Dubai kwi-2020. Elinye iphuzu eliphambili apho inkampani yethu ibeke kwi-Emirates. Ngaba unolwazi oluchanekileyo malunga nokufaka isicelo kwi-2020. Yaye yintoni enye indlela enokubakho kwiindawo ezifudumeleyo?
Iqela lethu lokuqesha likhokela abasebenzi eMbindi Mpuma. Ubungqina obunamandla obukhulu bokufumana umsebenzi kwi-UAE. Ngokuqhelekileyo, ukukwazi ukuba ungathumela phi iCV yakho. I-Dubai ngokuqinisekileyo indawo efanelekileyo yokuhlala nokusebenza.
Ukususela kumphathi wezorhwebo, iqela lokuthengisa kunye nobunjineli. Wonke amathuba omsebenzi afumaneka kwii-Expat Dubai. Iindwendwe ezintsha ze-expat ziyakwazi ukufumana umsebenzi e-Dubai 2020. Ngexesha elifanayo kwanokufumanisa indlela yokulawula i-resume e-Dubai. Ngaphezu koko, umzekelo ogqwesileyo kakhulu wee-sicelo. Yaye nendlela yokudibanisa kunye nabasebenzi be-recruitment. Konke oku kufumaneka kwizithuba zethu zeblogi. Iqela lethu labacebisi bezemisebenzi elinde ukuqala kwakhona.
Imisebenzi Ukuthumela kwi-Dubai 2020
Zama ukuba yi-expat e-UAE. Uninzi lwabantu, kwimeko apho, ukutyelela i-UAE. Kuhambela i-visa kuphela. Kodwa kwiimeko ezininzi, iimfuno eziyimfuneko zisebenza i-visa. Ngoko qi ni sekise ukuba uza kufunda isikhokelo esipheleleyo se-Dubai. Iqela lethu likhangele phambili ekukuboneni rhoqo. Nceda uqonde indlela yokufumana umsebenzi kwi-Emirates kwi-2020. Abafuna umsebenzi onenhlanhla.
I-Dubai City Inkampani ibancedisa abasebenzi. Abaxhamli abatsha nabakhoyo abafumana izithuba zemisebenzi emitsha kunye nenkampani yethu. Zama ukuba enye yazo kwaye utshintshe indlela ophila kuyo. Ukunikezelwa kwezi ngongoma, iqela lethu likumema ukuba usebenze e-Dubai 2019. Iqela lethu lihlala libeka izithuba ezitsha ezihlaziyiweyo kumashishini ethu eendaba zoluntu. Ngakolunye uhlangothi, sisoloko sisebenzisana nabanye. Umzekelo iBayt.com kunye neCareerJet. Ukuphumelela ukubeka abaviwa bangaphandle basebenze phesheya e-Dubai.
Imisebenzi e-Dubai 2019 kubahlali basemzini nabemi base-UAE
Imisebenzi e-Dubai 2019, malunga nendlela yokufumana umsebenzi ngaphandle kwe-Dubai. Fumana umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Yiba nesikhokelo esifanelekileyo sokuthumela
Imisebenzi eNdiya kunye nabaphathi bethu bokuqesha. Inkampani yethu ngoku iqesha eNdiya. Kuze kube ngoku, sithola izicelo. Ngokukodwa kwiinkampani zaseNdiya. Ngenxa yokuba bafuna abaphathi abakhulu. Kwaye oku ngqondweni, iqela lethu lilawula izikhundla.
Njengoko kunjalo, sinceda abantu ukuba babe ngabasebenzi. Kwaye oku ngqondweni, abafuna umsebenzi wase-Indiya bakhuthaza inkampani yethu. Ngokomzekelo, sinabo abalandeli abakhulu kwi-Facebook kunye ne-Linkedin. Ngenxa yokuba i-telly yethu inceda abaphathi. Ngakolunye uhlangothi, kukho iinkampani ezininzi. Ukuba iqela lethu lisebenza kunye. Ngendlela efanelekileyo, siqeshisa ngamacandelo amaninzi. Umzekelo, isebe le-IT kunye nokuthengisa. Kanye neenjineli zaseIndiya. Amathuba anxulumene nemisebenzi karhulumente.
Iqela lethu lababoneleli ngemisebenzi. Kanye kunye nabaqeqeshi abaqeqeshiweyo. Ngoku ushukuthela kwimarike yomsebenzi waseNdiya. Kwaye nakwiqela lethu, into entsha entsha. Kodwa, ngokwenene, sijonge phambili abafuna umsebenzi wase-Indiya. Kungakhathaliseki ukuba yintoni amava enkampani esiya kuba nayo. Iqela lethu lokuqala liza kuba ngumsebenzi waseNdiya.
I-Dubai City Inkampani ikhuthazwa. Iqela lethu lisebenza ukunceda abantu base-Indiya. Kwaye ngoku sinceda ekufumaneni umsebenzi eMumbai. Enye yezona zixeko ezilungileyo ukusebenzela njengomlawuli waseNdiya. Ngomzuzu iMumbai ine-16 yezigidi zabantu. Kwaye oko kunika inzuzo enkulu. Ikakhulukazi phakathi kwabasebenzi abafundiswe kakuhle. Imisebenzi e-Mumbai ayikho lula ukuyifumana. Ngoko ke, jonga amathuba angabasebenzi kwiinkampani zaseMumbai. Ngakolunye uhlangothi, kwi-city city yaseMumbai, kukho ininzi enkulu kwimibutho emincinci kunye nakwiifom zendawo zokusebenza. Esi sixeko saseIndiya kulungile ukuya kwindawo. Ingakumbi kubasebenzi abanolwazi.
Ukufumana umsebenzi eKolkata kuyintlangano ehlakaniphile. Kuze kube ngoku, esi sixeko sinezigidi ezili-13. Ngoko, nje ngokuba abantu bebafumana bathemba. Loo mzi ubonakala ukhulu. Ngenxa yoluntu. Kwaye kunye neenkampani zamazwe ngamazwe. Elula ngenxa yabantu kunye noxhumano lwabo lwamazwe ngamazwe. Njengomlawuli osebenzayo. Kufuneka uzame ukufumana umsebenzi eKolkata.
Ukupheliswa kwemisebenzi eNdiya
Ngoko, ukuba ufuna imisebenzi eNdiya. Ngokuqinisekileyo kufuneka ujonge kwiikhokelo zethu. Ngale ngqondweni, sinika ezininzi iinkcukacha zolwazi. Eyona nto eyenzelwe ukuba ihlaziye kunye nabaphathi abanamava. Sinika isikhokelo kumanqaku ethu. Jonga ngaphantsi kwendlela yokufumana umsebenzi kwiindawo ezilungileyo ze-Indan. Ngoko, ube ngumsebenzi onoyolo. Ngaphezu koko, zama ukusebenzisa inkqubo yethu. Ngethemba, uza kufumana umsebenzi eNdiya. Iqela lethu likufuna inhlanhla.
Imisebenzi eNdiya - Sinika isikhokelo sibheke indlela yokufumana umsebenzi
Imisebenzi e-India izikhokelo zokuhlaziya kunye nabaphathi abanamava. Sinika isikhokelo kumanqaku ethu. Jonga indlela yokufumana umsebenzi kwiindawo zase-Indan.
I-LinkedIn yindawo engcono kakhulu yomsebenzi. Kungekudala ithatyathwe yiNdiya ilindele. Ngakolunye uhlangothi, okulungileyo kunxibelelwano lwehlabathi. I-portal ekhangayo kakhulu apho ootitshala bangaphinda bahlaziywe kwakhona. Kwakhona indawo ephezulu yokufumana umqeshi ofanelekileyo. Ukuze udibanise ungakwazi ukujoyina amaqela emisebenzi ukuxhuma nabanye.
Ukufumana i-alumni kwaye ithathe inxaxheba malunga nenkqubo yengqesho. I-Linkedin inkampani ene-300 abasebenzisi basezigidi. Ngokubanzi babe ne-100k abajoyina abatsha. Ukunyaniseka, le nkampani iyona nto ibhetele kwiklasi. Ngaphezu koko, ungancokola nabantu abanomdla kakhulu abanokukunika iingcebiso ngakumbi. Eyona ndlela enokukhetha ngayo unokuxoxa rhoqo ngemini ngaphandle kwemida. Ukudibana nawe, ootitshala.
Ngakolunye uhlangothi, Funda isikhokelo sethu. Zama ukufumana ngaphezulu. Kwaye kunye. Zama ukufumana umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Kwakhona, jonga abanye abasebenzi basekuhlaleni. Yonke ikhangele phambili ekufumaneni umsebenzi. Ingakumbi kwi-intanethi yoluntu.
Uxhumano lwe-Linkedin lwezentengiselwano kwi-Expats e-Dubai City
Uqhagamshelwano lwenethiwekhi. Fumana indlela yokufumana umsebenzi e-Emirates. I-Dubai City Inkampani inikezela ngeenkonzo ezixhomekeke ngaphandle kwi-Dubai City
Imisebenzi yoLawulo kwi-United Arab Emirates. I-Dubai City Inkampani ebanceda abantu. Ngale nto engqondweni yengqesho ingatshintshwa. Abaphathi bezinga eliphakathi. Ngokuqinisekileyo ujonge phambili ekuthatheni umsebenzi. Ngokukodwa kwi-UAE. Ngale nto engqondweni yethu nkampani. Kuze kube ngoku. Udidi ngokubeka abaphathi. Ngokuqhelekileyo, i-Dubai ne-Abu Dhabi. Yingakho i-Dubai City Inkampani iba yinkampani ephakamileyo ephakamileyo. Kulo, into enye kwiGulf Area.
Ulawulo lwezobugcisa lulungele ukulungiselela. Njengoko kunjalo, inkampani yethu inceda abathunywa belizwe. Inkampani yethu yenza impembelelo kubantu ubomi. Injongo yethu kukukunceda ufikelele kwiinjongo zakho zobugcisa. Kwaye sizama ukuqhubeka uze uwenze. Yenze umsebenzi wakho wokuLawula ube yinyaniso. Kholelwa kuwe ukuba unokuba ngumphathi ophezulu e-UAE. Ukutyumba umsebenzi e-Dubai. Yenze ukuba ibe yinto efanelekileyo. Qalisa umsebenzi omtsha kunye nenkampani yethu.
Ithuba likhoyo e-Emirates. Kuphela kuwe xa wenza ubukhulu. Ukufumana umsebenzi ophezulu. Ukubonisa ekupheleni. 'Ungaze unikezele. Layisha kwakhona. Qalisa umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Ngenjongo yokuba eyodwa. Makhe sikholwe kuwe.
ImiSebenzi yoLawulo kwi-United Arab Emirates naseGulf
ImiSebenzi yoLawulo kwi-United Arab Emirates naseGulf. Abaphathi bezinga eliphakathi. Ngokuqinisekileyo ujonge phambili ekuthatheni umsebenzi kwiGulf
Inkcazelo yasePakistan kunye nezikhokelo ze-UAE
IPakistan yilizwe lamaSilamsi. Kwaye lonke uhlobo lwethu lulo lonke leli lizwe. Abasebenzi basePakistan base Dubai. Kukho abaphathi abaninzi. Kanye nabaphathi abakhulu beesile. Ngenxa yabantu abahambayo. Ngokukodwa kweli lizwe. Ngaba yinto efanelekileyo. Ngale ngqondweni, inkampani yethu inikeza ulwazi oluxabisekileyo. Njengokuba kunjalo, iqela lethu likhokela. Indlela yokufumana umsebenzi e-Dubai njengePakistan.
Iqela lethu leengcali. Ukulawula ulwazi olunzulu. Konke ngePakistan. Ngoko ke, ukunceda abanye kubalulekileyo. Ngokukodwa ne-Dubai City Inkampani. Iqela lethu libeka abasebenzi. Sebenza phesheya njengePakistan ukuya e-Dubai. Ngaba senza okulungileyo.
Ngakolunye uhlangothi, abasebenzi baseMuslim. Ukufakela kakuhle kwi-Gulf esifundeni. Kuphela yinkcubeko efanayo. Ngoko ke kulula ukwenza lula. Ngokukodwa ukufumana iziqu ezitsha. Yingakho abaphathi beli lizwe. Ukusebenzisa inkampani yethu e-Dubai. Ukufakwa kwi-United Arab Emirates. Okanye nakwiiGulf Countries. Kungenxa yokuba iPakistan ineemfundo ezilungileyo. Ukuthetha isiArabhu ngokunjalo. Nceda ujonge ngaphantsi. Into esinokuyenza. Funda amanqaku ethu malunga nomsebenzi kunye nomsebenzi. Ngaphantsi kwezo meko, zifakwa kwi-Emirates.
Inkcazelo yasePakistan kunye nezikhokelo ze-United Arab Emirates
Inkcazelo yasePakistan kunye nezikhokelo ze-United Arab Emirates. I-Pakistani iya kufumana ixabiso elininzi ngamanqaku ethu. Dubai City Inkampani ebhala malunga nokufudukela.
Ulwazi lwelizwe laseKatar eliya kubafudumi
Qatar kubantu abafuna umsebenzi. Iqela lethu libhalela ngokufumana umsebenzi. Ukusuka eKatar ukuya e-Dubai nase-Abu Dhabi. Ngenjongo yokunceda abafuna umsebenzi, iqela lethu libhala amanqaku amaninzi. Abafuna uYobhi baseKatar ngamanye amagama. Ngokuqinisekileyo unokufumana ixabiso ngelixa sifunda isithuba sethu. Ngenxa yenkampani yethu. Ngenxa yoko, sibeka iKatari. Ngokukodwa kwi-United Arab Emirates.
Ngoko, njengomfunyi womsebenzi, kufuneka ube nombono. Into enokwenza ngayo inkampani yakho. Ngokomsebenzi wokukhangela kwi-UAE. Ngakolunye uhlangothi, ukuba awuyi kulandela imigaqo ethile. Kuya kuba nzima ukufumana umsebenzi omhle e-Dubai. Ngaloo nto engqondweni yamacandelo ethu okubhala amacandelo. Ukufumana umsebenzi wokuzithengisa yile nto esiyenzayo. Abaphathi bethu abahlala behlala bekulindele ukuqala kwakhona.
Njengoko kunjalo, abaphathi bethu bakwa-HR. Ndihlala ndikhangela iindlela ezintsha zokukunceda. Ngoko, iqela lethu libeka amanqaku. Izithuba ezintsha zeblogi malunga nabasebenzi baseQatari e-Dubai. Nendlela yokufumana umsebenzi e-Dubai ukusuka kwezinye iindawo eMbindi Mpuma. Ndiyathemba ukukubona kwiwebhusayithi yethu. Kaninzi.
Ulwazi lwelizwe laseKatar malunga nabafudumi base-UAE
Ulwazi lwelizwe laseKatar malunga nabafudumi abazimisele ukufudukela kwi-UAE. Izikhokelo ezigqityiweyo zokufumana umsebenzi kwi-UAE. Ivela kwi-Dubai City Inkampani.
Ulwazi lweRejista kunye nokuhlaziywa
Isikhokelo se-recruiter kunye neengcezu zolwazi. Eyona nto eyenzelwe abafuna umsebenzi. I-Dubai City Inkampani inceda ekufikeleleni ukuqesha abaphathi. Ngakolunye uhlangothi, unokufumana inkampani enhle ye-HR. Ngale nqaku. Ngethuba elifanayo, iqela lethu lihlola. Ukubeka ulwazi malunga nabaphathi abaqeshwayo. Kwaye ngaphezu kwabo bonke abancedayo abafuna umsebenzi.
Ngakolunye uhlangothi, iDolophu yaseArabic, ngokwenene, yindawo ephakamileyo. Ingakumbi kubaphathi abaqeshwe. Ngale njongo, inkampani yethu yongezwa. Ukuqeshwa nokuqeshwa kwinqanaba. Ndiyathemba ukuba, unceda abafuna umsebenzi ukuba bafumane umsebenzi. Kwaye abaqashi bafumana abaviwa.
Ngenjongo yokunceda abanye. Inkampani yeSixeko sase Dubai. Ukuphononongwa kweenkampani eziphambili ze-HR. Emazweni aseGulf. Ukufikelela kwiimarike zamazwe ngamazwe. Zonke ezo zifumaneka kumanqaku ethu. Nceda ujonge ngaphantsi. Bhalise neenkonzo zethu. Ingcali yethu inokukunceda. Ekugqibeleni ukuba, abacebisi abanenhlanhla. Ndiyathemba ukukubona kwi-UAE.
Umqashi kunye nokuqesha abaphathi ulwazi kunye nokuhlaziywa. Abaqashi nabaqeshi abaphathi kunye nabaphathi be-HR. Ulwazi oluyimfuneko kunye nokuphononongwa kwabafunayo kwi-United Arab Emirates
Qalisa kwakhona imizekelo kunye neengcebiso
Qala imizekelo kunye neengcebiso zokuba nemisebenzi emihle. Uninzi lwabaphathi bamagosa abaqeshwayo balindele phambili ekufumaneni i-best-written resume. Njengoko kunjalo, ngaphambi kokuba umntu enze isicelo somsebenzi. Kukho izinto ezimbalwa kufuneka zilandelwe. Iqondo elifanelekileyo lamava kunye nephulo lokupeliswa kunye negrama. Kwiimeko ezininzi, isicelo somsebenzi kufuneka senziwe singenabala. Ngokukodwa ulawulo kunye nezithuba eziphezulu zezikhundla.
Izicelo zeJob zokufumana umsebenzi. Kukho ulwazi oluninzi kwi-intanethi. I-CV yinto eyokukunceda ukuba ufumane umsebenzi ngaphandle. Masibhekane nalo, abaqashi bangayiqwalasela zonke iileta zovavanyo. Ngaphantsi kwezo meko, kufuneka ukwazi ukubhalwa kwakhona. Ngokuqhelekileyo, abantu abathumela abahlwempuzekileyo bavelisa kwakhona. Enye yemimiselo ukulahlwa kwamagama. Akukho manani oomnxeba kunye noqhagamshelwano. Ngale nto engqondweni, inkcazo yethu yokubhala kwenkampani Ngenxa yezinto ezininzi ezifunekayo kunye neengcebiso zokufumana umsebenzi kumazwe ngamazwe.
Nceda ujonge ngaphantsi. Ithimba lethu likhokela ngokukhawuleza kunye nabemi bendawo. Iqela lethu liyakubhala ngokubhala ngokucacileyo isicelo somsebenzi.
Imizekelo yeRumum kunye neengcebiso zokufumana umsebenzi kumazwe ngamazwe
Qalisa kwakhona imizekelo eneenkcukacha ezicacileyo kunye neengcebiso zokufumana umsebenzi kumazwe ngamazwe. Fumana indlela yokubhala i-CV ngendlela abaqeshi bathanda ngayo.
IiNkonzo zoKhenketho zeexpats
Ii-arhente zokuqeshwa zenziwa ngokubanzi ngenjongo yokufumana umsebenzi. Ngaloo nto engqondweni ye-Dubai City Inkampani ecebisa abafuna imisebenzi. Njengoko kunjalo, kukho ezininzi zazo. Umzekelo, siwahlula ngokwahlukileyo. Kukho uRhulumente kunye ne-arhente yokuqesha yabucala. Ngakolunye uhlangothi iinkampani ezinkulu kunye ne-ejensi yokuqesha indawo.
I-Dubai City Inkampani icebisa abahlali basemzini nabemi basekhaya. Ngokuqeshisa iinkampani. Enye yeengongoma eziphambili esithintekayo kwiinkampani zethu. Ngale nto engqondweni, sikhokela abafunayo emisebenzini yonke imihla. Ngokuqhelekileyo ethetha malunga nabaqashi abafanelekileyo kwiedolophu
Inkampani yaseDaibra ukukhomba ngokufihla iinkonzo kwihlabathi jikelele. Ngokomzekelo ukuqasha iifemu e-Saudi Arabia, e-Qatar, kunye ne-South Africa kunye ne-United Arab Emirates. Lindela ukujonga imihla ngemihla. Eyona nto ibhetele isekelwe kwi-United Arab Emirates. Ungakhankanyi i-arhente eziqashisayo zokuqeshisa ngamazwe ngamazwe. Ekugqibeleni, iqela elinamandla, uRand Stad, iBayt.
Amaziko okuThengisa ama-expits kunye ne-Dubai City Inkampani. Fumana i-arhente eziqashisayo zokuqesha kunye nabaqeshi belizwe jikelele kwi-GCC ye-Gulf Jobs.
Isikhokelo saseSri Lanka sokuthumela kwi-Dubai
ESri Lanka ulwazi olunzulu malunga nomsebenzi phesheya. Ukungatsho nto yezinto ezisetyenzisiweyo ezise-Dubai. Zama ukusebenzisa yethu inkonzo. Uze uzibone phakathi kwezona zinto zilungileyo. E Dubai nase-Abu Dhabi. Nangona oku kuyinyaniso, Inkampani ye-Dubai City inceda abasebenzi. Ngexesha elifanayo, ukunceda ngeCV. Ukufumana iinkampani ezifanelekileyo. Enyanisweni ukulawula amathuba angcono. Ngokukodwa kwilizwe laseSri Lankan.
ISri Lankan ihamba ngokuya e-UAE. Ngale nto engqondweni, iqela lethu linceda abaphathi. Iinkonzo zethu zenkampani ezinika iinkonzo zokuthutha. Yingakho iindwendwe zivakashela iwebhusayithi yethu. Inkampani yedolophu yase Dubai ihlala ikhangele phambili ekuncediseni ukuphuma. Iqela lethu liyasiza. Phantse zonke iindlela zokufikelela kwiinjongo zobugcisa. Kuba inkampani yethu ibaluleke kakhulu. Ukuba uya kufakwa kwi-UAE. Ngenxa ye-Dubai ne-Abu Dhabi. Ngaba yinto engcono kakhulu yokufuna umsebenzi.
Fumana okunye, sinokukwenza ntoni kuwe. Sinokukunceda njani nangona uphando lwemisebenzi. Jonga ngaphantsi kwiingcebiso zethu. Ukuba nethemba baya kukunceda. Ngokukodwa ukufumana umsebenzi kwi-UAE.
Isikhokelo saseSri Lanka sokuthengisa. Iinkcukacha ezipheleleyo malunga nokufumana umsebenzi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Ngokukodwa abafuna umsebenzi wamazwe ngamazwe abafuna umsebenzi ngaphandle.
UMzantsi Afrika ukusebenzela e-UAE
Ilizwe laseMzantsi Afrika kwaye liphuma apho. Imiba yethu ebhaliweyo ebhaliweyo ngabantu baseMzantsi Afrika. Ngokukodwa malunga nokuthumela abasebenzi. Ngaphantsi kweemeko, iqela lethu likwazisa abasebenzi. Kuze kube ngeli xesha, inkampani yethu isabancedisa abafuna umsebenzi. Ukufumana umsebenzi ngaphandle kwe-UAE. I-Dubai City Inkampani inceda abathunywa belizwe.
Abafuna imisebenzi ngaphambili. Iimfuno zokukhokelwa. Njalo xa befaka isicelo sokufumana umsebenzi. Ngokukodwa kwi-United Arab Emirates. Abantu baseMzantsi Afrika bafumana umsebenzi ngaphandle. Kwaye oku ngqondweni, inkampani yethu ibonisa indlela yokusebenza. Dubai City Inkampani ekuhlalutyweni kokugqibela. Ukubhala isicatshulwa esicacisiweyo. Ukusebenzela abantu baseMzantsi Afrika abafudukayo. Izinga lolwaphulo-mthetho e Dubai nase-Abu Dhabi likhulu.
Abasebenzi baseMzantsi Afrika bafundiswe kakhulu. Ngomqondiso ofanayo, ukuba sibafanisa namanye amazwe. Abasebenzi abavela kule ndawo emangalisayo. Ukwenza indlela yokuphuma kunye nokwenza inkqubela phambili. Kwaye ukusuka apho, uhamba ngokufudukela e-Dubai okanye e-Abu Dhabi. Kuya kubakho ukulungelelanisa nendlela ethile yokuphila yaseArabhu. Ngaphezu koko, kukho inamba enkulu. Iimfuno ezikhoyo
UMzantsi Afrika usebenza kwi-United Arab Emirates naseGulf. Imiba yethu ebhaliweyo ebhaliweyo malunga nabemi baseMzantsi Afrika basemaphandleni. Ngokukodwa malunga nokuthumela abasebenzi.
Saudi Arabia ulwazi ngomsebenzi
I-Saudi Arabia ngolwazi kumsebenzi wabasebenzisi basekhaya kunye neziza. Abantu bajonge phambili ekufumaneni umsebenzi. Ngenxa yesi sizathu, ngenye yeendawo ezifanelekileyo zokusebenzela. EMbindi Mpuma. Ngaloo nto, engqondweni, gcina i-Saudi Arabia. ingqalelo kule nqanaba. Inqaku lethu lilonke malunga nokusebenza kweli lizwe. Ngaphezu koko, ukufudukela eSaudi Arabia. Okanye nendlela yokufumana umsebenzi kweli lizwe leGCC. Ngaphantsi kwezo meko, jonga izinto esinokukwenza ngazo.
Kwimeko elungileyo, kweli lizwe. Ziinkampani ezininzi zokuqesha. Okumangalisa kukuba abaninzi baqesha. Ngokuqhelekileyo ethetha e Dubai nase-Abu Dhabi. Inkampani yethu ihlaziya. Ukususela kwiinkampani kunye nokuqesha abaphathi. Konke malunga neli lizwe elimangalisayo laseMpuma Mpuma. Ngakolunye uhlangothi, le ndawo inokuvavanya imida yakho. Akulula ukuphumelela kwilizwe lamaSilamsi. Ukusebenza kumazwe eGCC.
Yenza ube ngumsebenzi omeleyo. Khumbula iindlela ezinzima kakhulu. Uhlala uthabathela kwiindawo eziphambili. Ukusebenza eMbindi Mpuma. Ukwenza abafuna umsebenzi abanamava aphambili.
Saudi Arabia ulwazi ngomsebenzi. Ukuqina kwethu kunceda kwaye kubakhokelela abafuna umsebenzi. Ukusuka kubasebenzisi basekhaya kunye namazwe angaphandle. I-Middle East ikhokela.
Usebenza ngolwazi lwangaphandle
Sebenza ngolwazi lwangaphandle kwelinye labo abafuna umsebenzi. Iqela lenkampani ye-Dubai yeengcali. Njengoko kunjalo, sinceda ekufumaneni umsebenzi ngaphandle. Yonke inkcazelo kwi-blog yase Dubai. Ngokuqinisekileyo ipapashwa ngokufanelekileyo. Ngenxa yokuba injongo yethu kukunceda abafuna umsebenzi.
Ngaphezu koko abafuna umsebenzi. Kufuneka sisebenzise isikhokelo sethu somsebenzi kumazwe angaphandle. Kuphela ngenjongo yolwazi jikelele. Abaphathi bethu baqokelela ulwazi. Ukubonelela ngemisebenzi kunye nemisebenzi evela kwiwebhusayithi. Abanye abantu banokuthumela imisebenzi yokunikezela kwisayithi yethu yomsebenzi. apho singenakho ukulawula. Umzekelo wamaqela e-WhatsApp kwiGulf.
Ngakolunye uhlangothi, sisoloko senza iziqinisekiso. Kuphina umphandi womsebenzi oza kusebenzisa inkonzo yethu. Inkampani yethu yonke into ngokugqibeleleyo yokufumana umsebenzi ngaphandle. Inkampani ehlala e-Dubaï iyathembeka kakhulu kwi-UAE. Ngokuqhelekileyo, iqela lethu libonelela ngokuchanekileyo le ngcaciso enikezwe kwenye indawo ye-portal.
Naliphi na isenzo othabathayo xa ufuna umsebenzi. Fumana kwaye uzame kwi-website yethu. Ukufudukela kwi-Dubai idolophu ngokuqinisekileyo kwingozi yakho. Ngoko sicela abafuna umsebenzi. Ukuba neqonga leenkcukacha ezipheleleyo. Ngokukodwa ngaphambi kokukhangela ukuya kwi-Gulf Jobs.
Kucelwa ufunde uphando olupheleleyo. Ngenkampani yaseDi Dubai. Ngaphambi kokufaka isicelo / ukuya kuyo nayiphi na udliwano-ndlebe kwi-website yabaqeshi. Ngenxa yokuba iqela lethu lokuqesha liyakhathalela ngamnye umcebisi womsebenzi. Sivuyiswa ngabatyeleli abatsha ngelixa sishicilela ukuqhubeka kwakhona kule ndawo.
Ukusebenza kwelinye ilizwe
Kodwa nceda ugcine engqondweni, ukuba imisebenzi yokucinga ithatha ixesha. Inkampani yase-Dubai City inceda abathunywa belizwe. Yingakho sineendawo eziphakamileyo kwilizwe langaphandle. Injongo yethu kukubeka abafuna umsebenzi. Uninzi njengoko sinako. Yenza abantu bahlali. Kwaye wanika umsebenzi kubo. Ngoko qhubeka ufunda isikhokelo sethu. Ukufumana ithuba lomsebenzi phesheya. Kwaye ekupheleni, ube nexesha elihle.
Sebenza ngaphandle kwelinye isikhokelo sabantu abafuna umsebenzi. Uze ufumane indlela yokufakwa njengomntu wasemzini. Silawula ulwazi oluxabisekileyo lomsebenzi
Isikhokelo somsebenzi wokufundisa
Isikhokelo sokufundisa somsebenzi kwi-United Arab Emirates. Inkampani yethu inceda abathunywa belizwe ukuba babe ngabafundisi. Ngaphantsi kweemeko, iqela lethu libhala amanqaku amaninzi. Ezinye zeenkampani, ngakumbi kwi-UAE. Ufuna ukuqesha ootitshala. Ngokomzekelo iikoleji kunye nezikolo ezizimeleyo. Kuzo zonke. Ootitshala bangaphuthuka kwimisebenzi yabo.
Iinkampani zikhangele ukuqesha ootitshala. Abafuna uYobhi bajonge phambili ukukhokela. Ngokuqhelekileyo, abafundi bethu. Ukulawula abafuna umsebenzi ngokucwangcisa amacebo. Kwaye kunye neengcezu zethu zolwazi olusebenza ngokwenene. Ngakolunye uhlangothi, sihlolisisa ootitshala nabaqeshi kwi-UAE.
Iqela lethu linika isikhokelo sotitshala opheleleyo. I-Dubai City Inkampani esebenzisa isikhokelo esicacisiweyo. Ngenjongo yokubonelela ngokulula. Ufumane umyalelo wokusebenza. Iqela lethu libanceda abafuna umsebenzi. Ekugqibeleni ukuba, nceda ujonge ngezantsi. Ube ngumfundisi ophumelelayo. Ngakolunye uhlangothi, i-Dubai City Inkampani. Ulindele ukuba u tyelele amanqaku ethu. Fumana umsebenzi e-Dubai. Uze ube ngumsebenzi onoyolo. Kwaye into enye, sifunda isikhokelo sethu. Silapha ukukunceda.
Isikhokelo sokufundisa somsebenzi kwi-United Arab Emirates. Inkampani yethu inceda abathunywa belizwe ukuba babe ngabafundisi eMiddle East kunye neGulf Area.
I-LinkedIn yindawo engcono kakhulu yomsebenzi. Kungekudala ithatyathwe yiNdiya ilindele. Ngakolunye uhlangothi, okulungileyo kunxibelelwano lwehlabathi. I-portal enomdla kakhulu apho ootitshala bangaphinda bahlaziywe kwakhona. Kwakhona indawo ephezulu yokufumana umqeshi ofanelekileyo. Ukuze udibanise ungakwazi ukujoyina amaqela emisebenzi ukuxhuma nabanye.
Inkqubo ye-Visa kunye nolwazi lokuthumela
I-Visa ngolwazi olunzulu malunga neziphumo. Eli candelo liyabasebenzi basezizwe. Kwabo bafuna ulwazi malunga nenkqubo ye-visa. Fumana neenkcukacha zethu iinkcukacha. Ngokukodwa ngokusebenza kwelinye ilizwe. Ngaphantsi kweemeko, iqela lethu libhalela ulwazi olupheleleyo. Njengomcimbi, inyaniso, ukungena eMiddle East. Kwamazwe amaninzi, inkqubo ye-visa iyadingeka. Ukususela ekuhambeni okanye nakwi-visa yokusebenza. Ngaphambi kokuhamba, zonke izinto ezicatshangwayo, kufuneka. Ngokuqhelekileyo uthetha, kungakhathaliseki ukuba uya kuphi. Kufuneka uzilungiselele. Ipasipoti kufuneka ifike ngoku. Kanye ne tikiti.
Ngoko, into enye, ukulungiselela ukuhamba kubalulekile. Ngokomzekelo, amaxesha amaninzi kufuneka asebenzise amaphepha asebenzayo. Ngoko, ngala manqaku. Abafunayo abatsha bangaphandle. Ukhangele phambili kwisikhokelo. Umsebenzi wethu kukukunceda ufikelele kwi-career.
Ukubonisa iqela lethu kubhala izithuba ezintsha zeblogi. Phantse ngeveki. Umzekelo, yintoni ofuna ukufumana imvume yokusebenza. Ngenxa yokuba ukukhangela umsebenzi yinto enye. Yaye kunye nokufumana iteksi yengqesho enye ibali. Yingakho i-Dubai City Inkampani inceda ukuphuma kunye neemvume zokusebenza.
Iqela lethu libhalela malunga neMbindi Mpuma. Kanye namazwe eGCC. Kwimeko elungileyo, uya kufumana ulwazi oluthakazelisayo. Ngokusebenza kwamanye amazwe nakwamanye amazwe. Abafuna umsebenzi onenhlanhla. Ngethemba lokukubona ngokukhawuleza e-Dubai City.
Inkqubo ye-Visa kunye nekhokelo yolwazi ngokuthumela amazwe jikelele. Eli candelo liyabasebenzi basezizwe. Kwabo bafuna ulwazi malunga nenkqubo ye-visa
WhatsApp Groups kwiGulf
WhatsApp Groups kwiGCC. Ngaphezu koko, makhe sithethe kuMbindi Mpuma. Inkampani yethu inceda abantu ukuba bafumane umsebenzi ovuyolayo eMzantsi Mpuma. Iqela lethu lilawula amaqela emisebenzi emininzi. Njengoko kunjalo, bonke bahlawulelwayo. Kwaye phantse nawuphi na umntu unako ukujoyina. Uxhomekeka ekuqaleni ekuqaleni ukujoyina amaqela. Ngoko inkampani yethu kunye nalokhu engqondweni yakha amaqela amaninzi okuqesha. Enyanisweni, siqale eDaibra. Emva koko abaqashi bethu bahambela yonke iMiddle East.
Kwaye emva kwexesha elithile, inkampani yethu yase-Dubai yandisa iinkonzo. Siqalise ukuvula amaqela amaninzi. Njengomcimbi, inyaniso abantu banokujoyina iGulf Groups. Kanye neKwait, Bahrain neKatar. Iingcali ezinolwazi oluninzi oluxabisekileyo. Ngaloo nto engqondweni, bayithumela ukuba kwii-WhatsApp Groups zidibanisa. Umzekelo, abaqeshi bajoyina amaqela ethu. Emva koko ukuthumela imisebenzi. Kwaye ekupheleni kwabo bafuna umsebenzi base Dubai. Ngaba okulula ?. Ewe yiyo. Konke okufuneka ukwenze kukuba ube nesicelo se-Whatsapp. Uze ujoyine amaqela. Abafuna umsebenzi onenhlanhla. Kwaye malunga nalesi sihloko ungayifumana ngezantsi.
Amaqela e-WhatsApp kwiCCC nakuMbindi Mpuma kwiMisebenzi. Fumana indlela yokufumana umsebenzi nje ukuba ubhalisele amaqela emisebenzi eselula e Dubai nase-Abu Dhabi
Umsebenzi eMiddle East.
Umsebenzi eMbindi Mpuma ungafumaneka ngokuqinisekileyo kunye nenkampani yethu. Silapha ukukunceda ukuphuma kuma-globle.
Amakhosi nge-Aetna International -Ubonelela ngenkathalelo yezempilo yehlabathi Aetna International isandula ukuphanda i-2,000 yokukhupha abasebenzi kwihlabathi liphela, ukufumana ukuba yeyiphi imiba yokufuduswa kwamazwe aphesheya echaphazela impilo-ntle yabo. Phakathi kwemibuzo, ii-expats zacelwa ukuba zichaze ukuba zeziphi iindawo zokuphila e-UAE ezizifumene sezingumngeni kakhulu. Uvavanyo luveze ukuba: I-91% ye-expats kwi-UAE ifumene 'ukuthandana' eyona nto inomngeni ekufudukeni kwelinye ilizwe. Oku kungaphezulu komndilili wehlabathi (76%) 90% ye-expats kwi-UAE ifumanise ukuba 'ukuthandana' kunefuthe kwimpilo-ntle yabo. Oku kabini kungumndilili wehlabathi (i-45%) i-91% ye-expats kwi-UAE ifumanise ukuba 'ukufumana abahlobo abatsha' kunefuthe kwimpilo-ntle yabo. Oku kungaphezulu kokuphindwe kabini kumndilili wehlabathi (43%) 40% ye-expats kwi-UAE ivakalelwa kukuba 'ukufumana uluntu' kunefuthe kwimpilo-ntle yabo. Oku kungaphezulu kunomndilili wehlabathi (24%) [...]
0 Funda ngokugqithisileyo
1 Funda ngokugqithisileyo
Ngamana 24, 2019
Yintoni omele uyenze e Dubai?